Tetikasa salvadôriàna maneho ireo fàka afrikàna « miafina» niavian’ny fiteny mahazatra ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Teny espaniôla, feno fiteny afrikàna saingy tsy fantatry ny maro
Mpanoratra Carlos Lara Nandika (en) i Anthony Sutterman, Marie Kéïta, imanoela fifaliana
Voadika ny 10 Febroary 2021 14:59 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Esperanto , русский, English, Français, Nederlands, Ελληνικά, українська, Filipino, Português, Español
Sary fanaingoana an'i Carlos Lara, noforonin'ny mpanoratra ary nahazoana alàlana taminy ny famoahana azy.
Ilay safiotra afrikàna-salvadôriàna, izay sady mpanakanto no mpikatroka, no nanoratra ny lahatsoratra izay izaràny amin'ny Global Voices ny sasantsasany amin'ireo asany. Ny sary fanaingoana rehetra navoaka ato dia an'i Carlos Lara ary nahazoana alàlana taminy.
[Ankoatra ireo asiana fanamarihana manokana, ny rohy rehetra dia mankany aminà pejy amin'ny fiteny espaniôla avokoa.]
Araka ny fanisambahoaka farany natao (2007), 7.400 eo ihany no Salvadôriàna miaiky fa manana fiaviana Afrikàna, na dia heverina ho tsy ahitàna taratra ny tena zavamisy aza io tarehimarika io. Marobe ny olona no manafina ny tena fiaviany noho ny antony pôlitika sy ny fanavakavahana napetraky ny jeneraly Maximiliano Hernández Martínez [fr] tany amin'ny taona 1930 tany ho any, tamin'ny alàlan'ny lalàna iray momba ny fifindramonina « nanjakan'ny toetsaina iray, kabary iray ary ireo fomba fanao nifototra tamin'ny fanavakavahana siantifika, izay mametraka laharam-pahamboniana amin'ireo vondrona, nanangana ireo foko sy mihevitra ny fotsy hoditra ho toy ny ambony noho ireo foko zanatany sy mainty hoditra». Nanomboka teo, marobe ireo safiotra afrikàna-salvadôriàna no nanafina ny foko niaviany.
Nankalazaina tamin'ny 29 Aogositra 2020 ny andron'ireo olona taranaka afrikàna ao Salvadaoro, tanjona tamin'izany ny hitantaràna ny tantàra tsy dia fantatry ny maro [en] momba ny vondrompiarahamonin'ireo manam-piaviana afrikàna ao Salvadaoro. Niainga avy amin'ny hevitry ny namana iray, ilay mpanakanto Jesús Cerén sy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana AFROOS dia nikarakara hetsika iray nomena anarana hoe «Arte Afrogosto» (avy amin'ny teny hoe Afro sy Agosto), nanasàna ireo mpanakanto sy mpanaingo mba hamoaka teny miisa 31 manana fiaviàna afrikàna ary ampiasaina amin'ny fiteny espaniôla salvadôriàna. Ny tao an-tsaina dia ny hanasongadinana ny halalin'ny dindo afrikàna ao anatin'ny kolontsaina sy ny fiteninay, na dia nolavina be aza izany zavamisy izany tany aloha tany.
Ry mpanakanto namana ! Tamina fotoana iray ianareo dia nandray anjara tamin'ny “inktober” izay, araka ny efa hainareo, dia fanamby iray natao hanaovana sary isanandro mifanaraka amin'ny teny iray hita ao anatin'ny lisitra ofisialy.
Indro ny sasantsasany amin'ireo teny nasehoko an-tsary ho an'io hetsika io. Hazavaiko fohifohy ao ny niforonan'izy ireny sy ny fampiasàna azy ao amin'ny faritra :
Chingar : Teny iray mahazatra ao anatin'ny espaniôla meksikàna. Midika hoe « manorisory»,« manelingelina»,« mila vaniny amin'ny olona iray ». Araka ny lazain'ny rakibolana RAE, teny nipoitra avy amin'ny fiteny rom« cingarár » izy io, izay midika hoe « miady ». Kanefa, ny hafa nikaroka sy nizohy ny niaviany avy amin'ny fiteny Bantu an'ireo Afrikàna nandevozina nentin'ireo Pôrtiogey sy Espaniôla.
Ao Brezila, ny xingar [pdf] (tononina hoe “chingar”) dia midika hoe ,« manafintohina», « manevateva», ary avy amin'ireo fiteny kimbundu sy kikongo singa avy ao Afrika Afovoany.
Cumbia : dihy malaza iray, manana fiaviana avy ao Kôlômbia sy Panama, izay manafangaro ny fomban'ireo fotsy hoditra, ny an'ireo afrikàna ary ny an'ireo teratany. Araka ny tsangan-kevitra sasany dia avy amin'ny cumbé izy io, dihy iray avy any Ginea Ekoatôrialy. Ho an'ny mpikaroka sasany indray, dia na izy io fanafohezana ny cumbancha avy amin'ny fiteny mandingue ao Afrika Andrefana, na fiovàna avy amin'ny kumba, kumbé sy kumbí, ny « k » lasa ho « c » amin'ny fiteny espaniôla amin'ny resaka « amponga » na « dihy ».
Ny cumbia dia iray amin'ireo toetra mari-panondroana manandanja indrindra ho an'ireo Salvadôriàna.
Gallina Guinea : Ara-bakiteny, akohovavin'i Ginea (anarany amin'ny teny frantsay ny hoe pintade de Numidie), izay « bitika, misy taolana kely toy ny sanga, loha sola, ary manana volo mainty manopy manga misy pentina fotsy, rambo fohy sy maranitra ».
Firenena afrikàna telo no manana anarana Ginea ary samy ao amin'ilay faritra mitondra io anarana io avokoa : i Ginea, i Ginea Bisao ary i Ginea Ekoatôrialy [fr]. Ito farany dia firenena miteny portiogey.
Guineo : Voankazon'ny akondro. Ny guineo, antsoina ihany koa hoe akondro, dia avy any Azia Atsimo-Atsinanana ; avy eo nipoitra tany Afrika sy tao Amerika nony ela taty aoriana. Ny anarana hoe guineo, kosa, dia mety ho avy any Afrika Andrefana izay fantatra taloha elabe tany tamin'ny anarana hoe « Ginea », midika hoe “tanin'ny Mainty” amin'ny fiteny berbère.
Amin'izao fotoana izao dia i India no voalohany mpamokatra akondro manerana izao tontolo izao, ary misy firenena iray ao Azia Atsimo-Atsinanana manana ny teny hoe Ginea ihany koa mandrafitra ny anarany : i Papouasie-Nouvelle-Guinée [fr].
Jelengue : Amin'ny fiteny espaniôla ampiasain'ireo ao Porto-Rico, midika « fahasorenana »,« tsy fahazoana aina », « fanohintohinana»,« zava-tsarotra». Ao Salvadaoro, io dia midika chonguenga (fihaonan'ny mpiaramonina), pachanga (alim-pandihizana), molote (korana takariva), jolgorio (lanonana), movimiento (hetsika), desvergue na fiesta (fety).
Marimba: Rehefa mandre ny hoe marimba, dia matetika i Goatemalà no ao an-tsaina, ary atambatra amin'ny tontolon'ireo indizeny. Kanefa ny marimba dia manana fiaviana afrikàna. Zavamaneno iray dabohana izy io, mitovitovy amin'ny xylophone [fr], izay ny anarany dia avy amin'ireo fiteny kimbundu na bantoues, satria ireo afrikàna nandevozina no nampiditra azy tany Amerika. Any amin'ireo fiteny ireo, fantatra ihany koa izy io amin'ny anarana hoe Kalimba na Malimba.
Mondongo: Karazana lasopy izy ity, karakaraina miaraka amin'ny vavonin'omby vavy (mondongo) na kisoa, ampiana hena hafa, legioma, anana sy hanitra. Nahandro nentindrazana io ho an'ny firenena marobe miteny espaniôla, heverina ho toy ny sakafo ofisialy ao Venezoelà. Ny teny hoe mondongo dia avy amin'ny mondejo, izay izy indray kosa avy amin'ny bandujo, ary tsy dia fantatra loatra izay niaviany.
Ireo Afrikàna andevo nampiasa ny fiteny bantoue no nampiditra io teny io. Sombin-kena omby atsipin'ireo tompony no nomena ho sakafon-dry zareo tamin'izany.
Pachanga : Anarana fandihy kiobàna iray, ary midika hoe « hotakotaka»,« fety »,« fialamboly maresaka ».
Ao Salvadaoro, manondro fety iarahan'ny daholobe na ny fianakaviana izy io, izay amin'ny ankapobeny dia dihy no atao ao.
Ny Pachanga dia azo antoka fa avy amin'ny fety iray atao hoe « para Changó » (ara-bakiteny dia hoe,« ho an'i Changó »). Changó dia iray amin'ireo andriamanibavin'ny finoan-dry zareo Fon sy ireo Yoruba ao Bénin sy Nizerià. « Para Changó » nivoatra ho « pa'Changó » ary lasa hoe pachanga nony farany. Azo ampiasaina ho toy ny matoanteny ihany koa izy, pachanguear (v.), na mpamaritoetra, pachanguera/o, ilazàna izay olona tia « mifety ».
Ruco : Any Kôlômbia sy Meksika, « antitra» no dikan'ny ruco.
Tao Salvadaoro, reko fa nisy dikany roa mifamatotra izy io: ny iray tamin'izy ireny dia ny antitra ary ny iray hafa dia ny banga ridana (mitovy amin'ny sholco). Fa na inona na inona, ny teny hoe banga ridana dia manondro olona iray anaty sokajin-taona voafaritra izay efa tapitra niala ny nifiny, queda ruco.
Zombi : Zavatra iray [fr] izay, amin'ny fomba maro samihafa, miverina indray amin'ny fiainana. Teny iray manana ny fiaviany avy amin'ny finoana « Vodou » avy amin'ny faritra iray ao Afrika Andrefana. Araka ireny finoana ireny, azo antsangana amin'ny maty ny olona iray nodimandry, amin'ny alàlan'ny fanaovan'ny houngan na bokor [fr] fombafomba samihafa ; rehefa tafaverina amin'ny fiainana, lasa mpanatanteraka ny sitrapon'izay nanangana azy tamin'ny maty iny olona iny.
Marobe no nambara fa mety ho niavian'ny teny hoe “Zombi”, afrikàna ny ankamaroan'izy ireny. Misy ihany koa ireo fikarohana atao momba ny fananan'ny teny “zombi” loharano avy any Haiti, mifamatotra ara-tantara amin'ny fanandevozana sy ny famoretana nisy tao aminy.
Carlos Lara dia mpikambana ao anatin'ny ONG Afrodescendientes Organizados Salvadoreños (AFROOS),« fikambanana iray miasa ho amin'ny fanekena, ny fijoroana ary ny tolon'ireo safiotra afrikàna-salvadôriàna ». Azonareo arahana ao amin'ny Facebook, Instagram sy Twitter, na ao amin'ny fantsony YouTube, raha te-hahafantatra ny asany sy hamantatra misimisy kokoa ny dindo afrikàna ao anatin'ny fiteny espaniôla salvadôriàna.